‘गिद्धे नजर’बाट बच्न साँहिली औलामा औँठी ! « Lokpath
२०७६, १३ फाल्गुन मंगलवार १७:५०
प्रकाशित मिति : २०७६, १३ फाल्गुन मंगलवार १७:५०
काठमाडौं- तपाईलाई कसैले गलत नजरले हेर्छ । तपाईलाई अप्ठेरो पार्ने हिसाबले वा तपाईलाई कूदृष्टिले कसैले हेर्छ भने त्यस्तो नजरलाई ‘गिद्धे नजर’ भनिन्छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता हेराईका कारण मानिसहरु विशेषत युवतिहरु निकै हैरानीमा पर्छन् । विशेष गरेर यस्ता नजरबाट बढी पीडित हुन्छन्, प्लस टु गर्दै गरेका युवती, गाउँबाट शहर आएकाहरु, नयाँ परिवेशबारे, त्यहाँको संस्कार र संस्कृतिबारे थाहा नपाएकाहरु, एक्लै बस्नेहरु, हातमुख जोर्न र कलेजको ‘फि’ तिर्नको लागि काम गर्नेहरु, या महिलाहरु । हुनत गाउँघरमा रिण तिर्न नसकेका महिलामाथी पनि यस्ता मानिसहरुले दुख दिएको समाचार बेलाबखतमा आइरहन्छ ।
के तपाई यस्तो गलत दृष्टि सामना गरिरहनुभएको छ ? तर तपाई त्यो मान्छेबाट टाढा रहन चाहनुहुन्छ । अब तपाईको लागि नयाँ जुक्ति छ ।
तपाईले साँहिली औलामा औँठी लगाउँदा गीद्धे नजरबाट जोगिनुहुनेछ ।
साहिँली औलामा औँठी :
साहिँली औलामा औँठी लगाउनुको अर्थ हो, तपाई कसैसँग सम्बन्धमा हुनुहुन्छ । पक्कैपनि तपाईले लगाएको औँठी देखेर त्यो मानिसमा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । तपाई अरु कसैको मान्छे हो । कार्यालय वा सार्वजनिक स्थानमा हुने दुव्र्यवहारहरु तथा गलत नजरबाट बच्न तपाई तपाईको लागि यो एउटा बलियो उपाय हुन सक्छ ।
भनिन्छ, सबै समस्याको समाधान औषधी उपचारबाट हुन सक्दैन । त्यसैले यस्ता समस्याबाट बच्न तपाईले अरु ‘टेक्निक’ पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ ।
स्पेस नदिनुहोस् :
कसैले तपाईलाई मन पराउँछ भन्ने थाहा पाउनुभयो तर तपाई उसलाई मन पराउनुहुन्न । मन पराउने र नपराउनेको द्धन्द्ध मेट्न पनि तपाई त्यो व्यक्तिलाई ‘स्पेस’/ठाउँ दिनुहुँदैन । ठिकै छ,आजलाई के भयो त ! एकैछिन भेट्दैमा के हुन्छ ? भन्ने सोच्नुभयो भने यो निश्चित छ तपाई जीवन थप जटिलता थप्न चाहँदै हुनुहुन्छ । त्यसैले बेलैमा विचार गरेर यस्ता हर्कत नगर्दा बेस हुन्छ । नत्र तपाईले उसका सामू बेपर्वाह मुस्कुराउनु भएको एक मुस्कानका कारण उसको मनमा अझ तपाईप्रति माया मौलाउन सक्छ । यसमा तपाई सचेत हुने कि !
सम्बन्धमा विकल्प नखोज्नुहोस् :
प्रिय मान्छेसँग सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, भने तपाईले भुलेर पनि विकल्प खोज्नुहुँदैन । यदि एउटा मान्छेको प्रेममा रहेर मष्तिष्कमा अर्को मान्छे सजाउनुभयो भने यो विल्कुलै गलत हुनेछ । यसर्थ तपाईले समुधर सम्बन्धमाविकल्प अप्सन भुलेरपनि नखोज्नुहोस् ।
एक्लै भेट्ने काम बन्द गर्नुहोस् वा पुराना यादहरु मेट्नुहोस् :
धेरै भयो भेट नभएको भेटौँ न भनेर श्रीमान्ले श्रीमतीलाई एसिड अट्याक गरेको घटना भएको धेरै भएको छैन के तपाई यस्ता गलत प्रवृत्तिबारे सचेत हुनुहुन्छ त ? हेनुहोस् फूलजस्तो जीवन नर्क बन्न बेर लाग्दैन । तपाईले जिस्कँदै भनेको स साना कुराले अन्तिममा तपाईलाई नै आघात पुर्याउँछ । सकिएको कुरालाई लिएर भेटघाट गर्ने, फोन गर्ने, च्याट गर्ने, गफिने, फोटो भिडियो सेयर गर्ने काम पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुहोस् ।
स्थिर मन,एकाग्रता :
जब तपाईको मन अस्थीर हुन थाल्छ,तपाई यी यस्ता नजरबाट बच्न सक्नुहुन्न । किनकि अस्थिर मनले तपाईलाई झनै जर्जर बनाउँछ । तपाई अर्को मानिसप्रति संयमित व्यवहार गर्न जान्नुहुन्न । त्यसैले एकाग्रता भएर जीवनलाई आफ्नो लय आफ्नै गतिमा अघि बढाउनुहोस् । पढ्नुहोस् । आफ्नो लागि दुखजिलो गरेर हुर्काउने अभिभावकत्व दिने र तपाईंमाथि भरोसा गर्नेहरुका लागि पनि तपाईंले बाटो मोड्नुहुँदैन ।
ठाउँ परिवर्तन गर्नुहोस् :
यदि तपाई आफ्नो पार्टनरसँग खुसी हुनुहुन्छ । तपाईको मनमा कसैप्रति माया छ । तपाई कसैको खास मान्छे हो, तर तपाईलाई कोही अरुले तपाई कार्यरत क्षेत्रमा दुःख दिएर हैरान पार्यो भने सम्झाउनुहोस्, कठोर बन्नुहोस् साथीभाईको सहयोग लिनुहोस् । यदि यसो गर्दा पनि तपाईको समस्या समाधान भएन भने कार्यालयमा काम गर्ने सिफ्ट परिर्वतन गर्नुहोस् ।
यसो गर्दापनि तपाईमाथिको अन्याय रोकिएन भने कानूनबारे जानकारी लिनुहोस् । प्रहरीसँग सेयर गरी प्रहरीसँग सहयोग माग्नुहोस् । आखिरमा कार्यालय नै छाड्ने विकल्पबारे सोच्नुहोस् तर गिद्धे नजरीयाबाट जरुर बच्नुहोस् ।
जीवन सकारात्मक सोचले मात्र फूलजस्तो बन्छ । यो स्विकार्नुहोस् तपाई जति धनि बन्नु भयो त्यति नै कठोर, ममता हराएको, निर्दयी, अशान्त बन्दै जानुहुन्छ । त्यसकारण सकारात्मक सोंच सफलताको अनिवार्य सर्त हो । तपाईंमा पनि यो सोंच जरुरी छ । भन्छन् नि, ‘आफू भलो त जगत् नै भलो ।’